Degmada WWTP - JDL Global Environmental Protection, Inc.
Ku saabsan JDL
Mabda 'Teknolojiyada FMBR
Aqoonsiga FMBR Iyo Abaalmarinta
WWTP ee degmada
WWTP oo aan baahin Miyiga
Tayada Sare ee Tayada WWTP (Wabiga & Dusha Biyo Bixinta)
Waxqabad WWTP dib looheliyey
Goobta: Magaalada Plymouth, USA
TAwoodda dib u eegista: 19m3/ d
WNooca WTP: Qalabka isku dhafan ee FMBR WWTP
Pkhafiif: Biyaha wasaqda ah ret Udiyaarinta → FMBR → Waxtar leh
Bishii Maarso 2018, si loo ogaado tiknoolajiyada hoggaamineed ee dhinaca daaweynta biyaha qashinka ah iyo in la gaaro himilada yareynta isticmaalka tamarta ee daaweynta biyaha wasakheysan, Massachusetts, oo ah xarun tamar nadiif ah oo caalami ah, oo si guud looga codsado tikniyoolajiyadda gogosha loogu talagalay daaweynta biyaha qashinka ah ee adduunka. , kaas oo ay martigalisay Massachusetts xarunta tamarta nadiifka ah (MASSCEC), oo ay ku fulisay tijaabo tiknoolajiyad casri ah dadweynaha ama aagga loo oggol yahay daaweynta biyaha qashinka ah ee Massachusetts.
Wakaaladda Ilaalinta Deegaanka ee MA waxay abaabushay khubaro awood u leh inay hal sano oo qiimeyn adag ah ku sameeyaan heerarka isticmaalka tamarta, bartilmaameedyada yareynta isticmaalka, qorshooyinka injineernimada, iyo shuruudaha caadiga ah ee xalalka farsamo ee la soo ururiyay. Bishii Maarso 2019, dowladda Massachusetts waxay ku dhawaaqday in Jiangxi JDL Environmental Protection Co., Ltd. “Teknolojiyada FMBR” la xushay oo la siiyay maalgelinta ugu badan ($ 150,000), iyo duuliye lagu qaban doono garoonka diyaaradaha ee Plymouth Wasakhda Daaweynta Massachusetts.
Qiiqa ay daweeyeen qalabka FMBR guud ahaan waa xasilloon yahay ilaa hawlgalka mashruuca, iyo celceliska qiimaha tilmaam kastaa wuu ka fiican yahay heerka ka bixitaanka maxalliga ah (BOD≤30mg / L, TN≤10mg / L).
Celceliska heerka ka saarista ee tusmo kasta waa sida soo socota:
Amooniyam nitrogen: 98.7%
Wadarta nitrogen: 93%
Location: Lianyungang City, Shiinaha
TAwoodda dib-u-celinta: 130,000 m3/ d
WNooca WTP: Nooca Xarunta FMBR WWTP
Si loo ilaaliyo deegaanka deegaanka deegaanka loona muujiyo muuqaalka magaalo xeebeed lagu noolaan karo oo warshadeyn leh, dowladda hoose waxay dooratay farsamada FMBR si ay u dhisto warshad lagu daweeyo bulaacada deegaanka oo u dhiganta qaab-dhismeed.
Ka duwan tiknoolajiyada daaweynta bullaacadaha dhaqameed ee leh raad weyn, ur culus, iyo qaab dhismeedka dhulka korkiisa, warshadda FMBR waxay qaadataa fikradda dhismaha warshadda bullaacadda ee bullaacad ahaaneed ee "ka koreysa baarkinka dhulka hoostiisa iyo xarunta daaweynta bullaacadaha". Nidaamka FMBR ee la ansaxiyay ayaa meesha ka saaray taangiga ugu horreeya ee faya-dhawrka, taangiga anaerobic, taangiga anoxic, taangiga aerobic, iyo taangiga sare ee hawo-qaadista ee hannaanka soo jireenka ah, wuxuuna fududeeyay socodka geeddi socodka oo si weyn u yareeya raadadka Dhamaan rugta daaweynta bullaacadaha ayaa ku qarsoon dhulka hoostiisa. Bullaacadda ka dib marka ay ka gudubto aagga gogoldhigga, aagga FMBR, iyo jeermiska-dila, waa la soo saari karaa oo waxaa loo isticmaali karaa biyo ahaan doogga dhirta iyo muuqaalka iyadoo la kulmayo heerka. Maaddaama dheecaanka haraaga haraaga ah ee organic uu si aad ah u yareeyay tiknoolajiyada FMBR, asal ahaan ma jiraan wax ur ah, geedkuna waa mid deegaanka u habboon. Dhamaan aagga dhirta waxaa loo dhisay fagaaraha xilliyada firaaqada, abuurista qaab cusub oo ah warshad lagu daweeyo bulaacada oo leh isfaham deegaan iyo dib u isticmaal biyo.
Location: Magaalada Nanchang, Shiinaha
TAwoodda dib-u-celinta: 20,000 m3/ d
Si loo xaliyo arrimaha deegaanka ee ay sababeen bulaacada guryaha, isla markaana si wax ku ool ah kor loogu qaado tayada deegaanka biyaha magaalooyinka, isla mar ahaantaana, iyada oo la tixgelinayo cilladaha ay leeyihiin dhirta lagu daweeyo bulaacadaha soo jireenka ah, sida qabsashada dhulka oo weyn, ur culus, ayaa loo baahan yahay in la joogo ka fog meesha la deggan yahay iyo maalgashiga baaxadda leh ee shabakadda dhuumaha, dawladda hoose waxay u dooratay tikniyoolajiyadda JDL FMBR mashruucan, waxayna qaadatay fikradda ah "Park dusha sare, tas-hiilaadka daaweynta ee dhulka hoostiisa" si loo dhiso warshad cusub oo lagu daweeyo bulaacada deegaanka iyada oo leh awood daaweyn maalinle ah 20,000 m3/ d. Warshadda daaweynta bulaacada waxaa laga dhisay meel u dhow deegaanka la deggan yahay waxayna ku fadhidaa dhul dhan 6,667m oo keliya2. Inta lagu jiro hawlgalka, asal ahaan ma jiraan wax ur ah iyo dhoobada haraaga ah ee dabiiciga ah ayaa si weyn loo yareeyay. Dhismaha geedka oo dhan wuxuu ku qarsoon yahay dhulka hoostiisa. Dhulka, waxaa lagu dhisay beer casri ah oo Shiineys ah, taas oo sidoo kale siinaysa meel firaaqada bey'ada iswaafajinta ee muwaadiniinta ku xeeran.
Goobta: Magaalada Huizhou, Shiinaha
Awoodda Daaweynta: 20,000 m3/ d
WWTP Nooca: Isku-darka Qalabka FMBR WWTPs
Geedi socodka: Biyaha Wasakhda ah ret Udiyaarinta B FMBR → Waxtar leh
Xeebta Xeebta ee FMBR STP waxay ku taal Huizhou City. Qiyaasta loogu talagalay daaweynta biyaha wasakhda ah ee guriga waa 20,000m3/ maalin. Qaab-dhismeedka ugu weyn ee WWTP waa taangiga qaadashada, taangiga shaashadda, taangiga isu-dheellitirka, qalabka FMBR, taangiga qulqulaya iyo taangiga wax lagu cabbiro. Biyaha wasakhda ah waxaa badanaa laga soo qaadaa seeraha xeebta, wharf badeecada biyaha, kalluumeysiga wharf, masduulaagii, Qianjin wharf iyo meelaha la deggan yahay ee xeebta. WWTP waxaa lagu dhisay xeebta, xird ilaa meesha la deggan yahay, waxay leedahay raad yar, dheecaan dhogor ah oo haraaga ah oo haraaga ah iyo wax ur ah oo ku jira hawl maalmeedka, taas oo aan saameyn ku yeelan deegaanka ku hareeraysan.
Weydii Xalka Biyaha Qashinka
Nala Soo Xiriirinfo@jdlglobalinc.com
Nala soo hadal+1 9703088442
Cinwaanka244 Fifth Avenue, Suite Q222 New York, NY 10001